TSAHO NIELY MOMBA NY RANO : Nisavoritaka tanteraka ny mponina tao Toamasina
Azo ambara fa tena efa matihanina amin’ny famoronana sy fanelezana tsaho tokoa ilay nanaparitaka ny tsaho izay nilaza fa tsy azo sotroina sy tsy azo ampiasaina ny rano, ny alahady 27 jaoary 2019 fa mahafaty. 27 janvier 2019
Tsy azo hoanina ihany koa ireo sakafo azon’ny tanik’andro ny andron’ny alahady fa mahafaty. Raha ny angom-baovao, dia tany amin’ny Faritra Sava no niaingan’io tsaho mahery vaika io voalohany. Ny harivan’ny sabotsy 26 janoary no teraka ilay tsaho. Misy olon-tsy fantatra fa miantso amin’ny finday nanaparitaka azy ary milaza sy manizingizina fa tsy azo ampiasaina mihitsy ny rano rehefa azon’ny masoandro ny alahady 27 janoary.
Nandaitra tanteraka izany. Tany amin’ny Faritra Sava, dia tsy natory mihitsy ny ankamaroan’ny olona ny alin’ny sabotsy 26 janoary fa nitatitra rano. Ny alin’io sabotsy io ihany, dia niely tamin’ny faritra maro ny tsaho ka tonga hatrany Toamasina sy ny Faritra Analanjirofo rehetra iny. Ho an’ny tao Toamsina, tamin’ny 4 ora maraina dia efa filaharambe tamin’ny toeram-patsakan-drano. Tamin’ny fokontany maro, dia nodondomin’ny vahoaka tany amin’ny trano fonenany mihitsy ny mpiandraikitra ny paompin-drano ao anaty fokontany. Saika nitovy tamin’izany avokoa ny fokontany maro tao Toamasina. Tao mihitsy moa ireo nihazakazaka nividy rano amin’ny tavoahangy amidy amin’ny toeram-pivarotana ireny.
Tao ireo nahandro sakafo tamin’ny rano anaty tavoahangy izay iaraha-mahalala fa sandaina vola misimisy ihany raha mitaha amin’ny ranon’ny Jirama na rano anaty lavadrano. Ny marainan’ny alahady 27 janoary, nisy ny fampitam-baovao nataon’ny prefen’i Toamasina, Cyrille Benandrasana rehefa nantsoin’ny mpanao gazety tamin’ny alalan’ny antso an-taroby. Niantso ny vahoakan’i Toamasina mba ho tony izy. Nilaza ity tompon’andraiki-panjakana ity fa efa niantso tekinisianina maro. Nolazainy nandritra izany fa tena tsaho tokoa ilay resaka miparitaka momba ny rano.
Ny marainan’ny alahady 27 janoary io ihany koa, dia nisy ny fampitam-baovao nataon’ny Jirama tao amin’ny pejiny facebook ofisialy.
Nilaza ny Jirama fa « manoloana ny tsaho miely dia nanamarika izy ireo fa tsy misy fiovana ny rano izay vokariny ary rano fisotro madio tanteraka ka tsy misy ahiana ». Raha ny tao Toamasina manokana, ny antoandron’ny alahady 27 janoary io ihany dia efa nanomboka lefilefy ilay tsaho taorian’ny fanehoan-kevitra nentin’ny Prefe, Cyrille Benandrasana. Mizarazara ny hevitry ny olona momba io tsaho niely io hatreto. Misy miteny fa tsaho ara-barotra iny tsaho iny mba hampandeha karazan’entana tiana handeha (rano, fahana). Ao kosa ny manombatombana fa tsaho nentina hanakorontana saim-bahoaka tsotra izao iny tsaho momba rano iny.
Ny azo ambara, dia tena nandaitra ilay tsaho ary niparitaka teo amin’ny sehatra nasionaly tao anatin’ny fotoana fohy. Tany amin’ny faritra Sava, dia nisy alim-pandihizana rava tampoka ny alin’io sabotsy io satria maika handeha hitatitra rano ny olona.